Buweynos ayres - Wikipedia
Caasimad in ArjantiinaTemplate:SHORTDESC:Caasimad in Arjantiina
2 Febaraayo1536 bedro de Mendosa
11 Juun 1580 khuwan de Garay
horasiyo Rodiriges Larrita
Biweynos ayris waa caasimada Arjantiina Biweynos ayris (/ ˌbweɪnəs ɛəriːz / or / -aɪrɪs /; Isbaanishka: Bwenos aiɾes] waa caasimadda iyo magaalada ugu badan ee Argentina. Magaaladu waxay ku taallaa xeebta galbeed ee ku taala xeebta Río de la Plata, oo ku taala koonfur galbeed ee koonfur bari ee dalka. "Biweynos ayris" waxaa loo tarjumi karaa "dabaylaha caddaaladda" ama "hawo wanaagsan", laakiin hore waxay ahayd macnaha ay aasaaseen aasaasayaashii qarnigii 16aad, adigoo isticmaalaya magaca asalka ah "Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre ". Iskudayga weyn ee Buenos Aires, oo sidoo kale ka mid ah degmooyinka Buenos Aires ee gobolada, waxa uu ka koobanyahay degaanka afaraad ee ugu badan ee ku yaala Ameerika, oo ay ku nool yihiin qiyaastii 17 milyan.
Magaaladan Biweynos ayris maaha qayb ka mid ah Gobolka Buenos Aires ama caasimadda Gobolka; halkii, waa degmo madax-bannaan. Sanadkii 1880, ka dib tobaneeyo sano oo colaad siyaasadeed ah, Biweynos ayris waa mid federaal ah oo laga saaray Buenos Aires. Xadka magaalada ayaa la ballaariyay si loogu daro magaalooyinka Belgrano iyo Flores; labaduba waxay hadda yihiin xaafadaha magaalada. Qodobka dastuurka ee 1994 ayaa la siiyay madax-bannaanida magaalada, markaa magaciisa rasmi ah: Magaalo-madaxda Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires; "CABA"). Muwaadiniintooda waxay marka hore doorteen hoggaamiye dawlad (oo ah duqa magaalada) 1996; horaantii, duqa ayaa si toos ah u magacaabay Madaxweynaha Jamhuuriyadda. 
Biweynos ayris waxaa loo tixgeliyaa 'alpha city' by daraasadda GaWC5. Tayada Buenos Aires ayaa ku jirta kaalinta 91aad ee adduunka, isagoo ka mid ah kuwa ugu fiican Latin America sannadka 2018. Waa magaalada ugu booqashada badan ee Koonfurta Ameerika, iyo magaalada labaad ee ugu badan ee booqatay Latin Amerika (oo ka dambeysa Magalada Maksiko).
Buenos Aires waa meel sare oo dalxiis ah, waxaana loo yaqaanaa naqshadeeda dhaqan ahaaneed ee Spain / Europe-style iyo dhaqanka qaniga ah. Biweynos ayris waxay qabatay ciyaarihii 1aad ee Pan American Games 1951 iyo sidoo kale martigelinta labo goobood oo lagu qabtay Koobka Aduunka ee 1978. Buenos Aires waxay martigelin doontaa ciyaaraha Olombikada ee 2018 iyo shirarka 2018 ee G20.
Buenos Aires waa magaalo dhaqammo badan, oo leh guri jinsiyado iyo diineed badan. Dhowr luqado ayaa lagu hadlaa magaalada intaa le'eg ee Isbaanishka, oo ka qaybqaatay dhaqankeeda iyo lahjadda laga hadlo magaalada iyo meelaha kale ee dalka. Tani waa sababta oo ah 150-kii sanno ee ugu dambeeyay magaalada, iyo guud ahaan dalka, waxay ahayd malaayiin qof oo muhaajiriin ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan, taas oo ka dhigaysa dherad khafiif ah halkaas oo dhowr kooxood oo jinsiyadoodu wada nool yihiin oo loo arko mid ka mid ah magaalooyinka kala duwan ee Ameerika.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Buweynos_ayres&oldid=223052"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 20:13.